उडान र आवास दुई रात माराकेचमा e० यूरो को लागी यात्रा समाचार
सुसाना Godoy | | मोरक्को, बोलपत्र
यो सधैं भेट्टाउन सजिलो हुँदैन महान सम्झौता जब यो यात्रा को लागी आउँछ। तसर्थ, आज हामी तपाईंलाई आफैलाई लुकाउन मद्दत गर्दछौं, तर तपाईंले सोच्नु भएको भन्दा सस्तो। के तपाइँ केहि दिनको लागि छोडेर कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको तालिकाबाट र एक शानदार गन्तव्यमा पछाडि?
हो, यो अलि बढी महँगो लाग्न सक्छ, तर हामी तपाईंलाई विश्वस्त गराउन सक्छौं कि तपाईंले एउटा अफरको सामना गरिरहनु भएको छ जुन तपाईंले छुटाउनु हुँदैन। किनभने तिनीहरू त्यस्तो प्रकारका छैनन् जुन धेरै दिन सम्म रहन्छ, त्यसैले तपाईं दुई पटक सोच्न सक्नुहुन्न। को विमान टिकट माराकेच जानसाथै दुई रातको लागि आवास 60० यूरोको बीमा हो।
1 उडान प्रस्ताव प्लस माराकेचमा आवास
2 दुई दिनमा माराकेचमा के हेर्ने
उडान प्रस्ताव प्लस माराकेचमा आवास
प्रस्तावमा माराकेचको २eयूरोको लागि एकल टिकट समावेश गर्दछ। तपाईं संग यात्रा हुनेछ एयरलाइन 'Ryanair' र यो बार्सिलोनाको 'एल प्राट' एयरपोर्टबाट प्रस्थान गर्नेछ। जब तिनीहरू यस जस्तो प्रस्तावहरू छन्, तिनीहरू सँधै प्राय: निर्दिष्ट स्थानहरू हुन्छन्, प्रस्थानको अन्य पोइन्टहरूसँग अन्य कुनै विकल्प बिना। दिन बुधवार जुन6छ र उडान समय बिहान :8:०० छ। स्थानीय समय अनुसार बिहान :00:२:8 मा मेनारा, माराकेचमा आइपुग्दै। यो महान प्रस्ताव प्राप्त गर्नका लागि तपाईले यसलाई मार्फत बुक गर्नु पर्छ स्काईस्क्यानर.
अब जब हामीसँग उडान टिकट छ, हामीले हाम्रो आरक्षण गर्नुपर्नेछ माराकेच मा आवास। यो गर्नका लागि हामी 'एज्जिया होटल' मा जान्छौं। त्यहाँ एउटा कोठा, एकल व्यक्तिको लागि र दुई रातको लागि 34 42 यूरोको मूल्य हुन्छ। जे होस् यदि तपाईं साथ हुन चाहानुहुन्छ भने, मूल्य e२ यूरोमा बढ्नेछ। हो, दुबै विकल्पहरूमा हामी जित्दै बाहिर आएका छौं। किनभने होटेल गुलिजमा छ, पलासिओ डे कांग्रेसोस नजिक र केन्द्रबाट केवल १.1,3 किलोमिटर। योसँग तीन तारा छन् र असंख्य सेवाहरू छन्, जस्तै वाइफाइ, पौंडी पोखरी, सुख्खा सफाई सेवाहरू र क्याफेटेरिया। के तपाइँ यस प्रस्ताव को फाइदा लिन चाहानुहुन्छ? ठीक छ, तपाईं बस पहुँच गर्न छ hotel.com
दुई दिनमा माराकेचमा के हेर्ने
हामीसँग थोरै समय छ, तर हामी एक सुन्दर ठाउँहरूमा छौं। यो सधैं हाम्रो लागि दुई दिन लाग्न को लागी छोटो हुनेछ, तर हामी यसलाई अधिकतम बनाउँदछौं। हामी तथाकथित 'प्लाजा डे लस टिन्स्मिथ्स' बाट हाम्रो यात्रा सुरु गर्न सक्छौं। एक धेरै अवलोकन गरिएको क्षेत्रहरू मध्ये एक र ठीक केन्द्रमा अवस्थित। यहाँबाट हिंड्दै हामी अर्को नामको वर्गमा जान्छौं, 'बाब मल्लाह खाडी'.
यदि हामी देब्रे तिर हेर्छौं भने त्यो स्थानमा हामी बहिया प्यालेस देख्न सक्छौं। दरबारको एक सुन्दर उत्तराधिकार साथै कोठा जुन दरबार बनाउँछ। तर यो भनेको उल्टो छेउमा पनि वर्गमा हामी नयाँ दरबारको आनन्द लिन गइरहेका छौं, यस अवस्थामा यो हुनेछ 'बाडी प्यालेस'। यसमा 300०० भन्दा बढी कोठाको साथसाथै पाटिओस पनि थियो। अलि अलि अगाडि हुनेछ 'सादियन चिहान'। तिनीहरू तीन समाधिहरू मिलेर बनेका छन् जहाँ मुख्य सादानी नेताहरू विश्राम गर्छन्।
माराकेच जस्तो ठाउँमा तपाईसँग हराउने समय हुँदैन। किनभने यो भनिन्छ कि सबै सडकहरू नेतृत्व गर्दछन् 'Jemaa El Fna स्क्वायर'। त्यहाँ तपाईं दिन भर असंख्य शो पाउन सक्नुहुन्छ। हामी भेट्न बिर्सन सक्दैनौं 'Koutoubia मस्जिद' न त 'मेनारा बगैचा'। हाम्रो भ्रमणमा मुख्य पोइन्टहरू, यद्यपि पछिल्लो बाहिरी इलाकामा छ।
यदि तपाईं आफ्नो यात्रा जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पनि 'लस Zocos' द्वारा रोकिनु पर्छ। यहाँ अनन्त तस्विर लिनको लागि राम्रो स्थान छ, तर हामी अलमल्लमा पर्नु हुन्न किनकि त्यहाँ अझै हेर्न बाँकी छ। स्थानहरू मनपर्दछ 'बेन यूसुफ मदरसा', 'माराकेचको संग्रहालय' वा 'अल्मोराविद कौब्बा' ती पनि आवश्यक छन्। त्यसोभए, हामीले आफ्नो समयलाई राम्ररी विभाजित गर्नुपर्छ। दोस्रो विचारमा, लगभगe63 यूरो संक्षिप्त हुनको लागि, यो एक धेरै पूर्ण यात्रा हो। तपाईं यी सबैबाट टाढा हुनको लागि के प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अफ्रिका » मोरक्को » उडान र आवास दुई रात माराकेचमा e० यूरो को लागी